Inona no sakana tsy hampiroborobo ny fitiavana isan’andro ?
Fy Ny Olontsoa, poeta : Sakana lehibe tsy mampiroborobo ny fitiavan'olon-droa ny hasarotam-piaro diso tafahoatra izay mitarika tsy fifampitokisana ary miteraka disadisa mampitsiry ny elanelana.
Mba hampivoaka tsara ny bika hahazo ilay endrika gitara dia ilaina ny manala ny tavy manodidina ny andilana sy ny sisin’ny kibo iny fa tsy ampy ny manala kibo fotsiny. Ireto atao dia hahazo izay vokatra izany ianao :
Manala « cellulite » amin’ny fe
Azo atao tsara ny manala ny cellulite amin’ny alalan’ny fampihetseham-batana tsotra atao ao an-trano. Atao matetika mba hahita vokatra haingana.
Manamafy ny nono miroraka
Azo atao tsara ny mampitombo ny tratra sy ny manarina ny nono miroraka. Ireto no fampihetseham-batana atao amin’izany :